Maxey doorashada Prof.Jawaari ka dhigan tahay, maxaase fashilay qorshihii Shariif Xasan? – idalenews.com
Muqdisho(INO)- Maqaalkan waxaan ku falanqeynayaa aragtideyda ku aadan doorashada Guddoomiye Jawaare iyo waxa ay ka dhigantahay, sababaha sida aqlabiyada leh loogu doortay iyo siyaasadaha ku xeeran tartanka doorashada Baarlamaanka Soomaaliya.
Madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Sharif Xasan Sheekh Aden ayaa in muddo ah u ololeynayey inuu arko isbedel ku yimaada nidaamkan, isagoo isu soo sharaxay xilka Madaxweynaha Soomaaliya. Istraatjiyadan waxey suurtogal noqon kartay in dhammaan xildhibaanada Digil & Mirifle aysan isa soo sharaxin, isla markaasna la helo xildhibaano kale oo sharaxan. Hase yeeshee mar haddii tani dhici weydey aad bey u muuqatay in la kala dooranayo musharaxiinta Digil & Mirifle, walow dadaalka Xidig uu ahaa mid muuqday oo uu 97 cod helay.